“Baabaa Bale ayaa kaa orod badan!”, Cristiano Ronaldo oo daaha ka rogay FOORJO uu kala kulmo wiilkiisa marka uu ka soo laabto School-ka, xitaa Messi ayuu la soo hadal qaadaa!! – Gool FM
“Baabaa Bale ayaa kaa orod badan!”, Cristiano Ronaldo oo daaha ka rogay FOORJO uu kala kulmo wiilkiisa marka uu ka soo laabto School-ka, xitaa Messi ayuu la soo hadal qaadaa!!
Kaafi May 26, 2016
(Madrid) 26 Maajo 2016. REAL MADRID superstar-keeda Cristiano Ronaldo ayaa qiray in wiilkiisa Cristiano Jr uu kula kaftamo in laacibka ay isku kooxda yihiin Gareth Bale ka dheereero.
Ronaldo – oo aabe u ahay inan shan sano jir ah – ayaa sheegay in Cristiano yare uu muujiyey halka aabihii looga wacan yahay isaga oo qisha in uusan garoonka ugu xawaare badneyn sida garabka Wales, Bale.
Sidoo kale Ronaldo waxa uu ogolaaday in uu aqbali doono hadii wiilkiisa doonayo taageerida Barcelona – balse uusan isaga u kexeyn doonin gegida Camp Nou.
Wareysi gaar ah oo uu siiyey La Sexta Ronaldo waxa uu yiri: “Inankeyga wax badan oo nolosheyda ka mida ayuu badalay. Mar waliba waxaan dhahaa waa riyo in aad wiil leedahay, wax badan ayuu I badalay.
“Mararka qaar waxa uu yimaada guriga isaga oo leh ‘Baba Bale ayaa kaa dheereeya’. Waxaan u dhahaa maxaad ula jeedaa? Ma jiro qof ka dheereeya aabahaa’
“Waxa uu dhahaa ‘Haa laakiin School-ka waxa ay igu dhahaan isaga ayaa dheereya iyo inuu Messi wareysi ku yiri inuu jeclaan lahaa lugtaada bidig, Wax yaabaha ceynkan ah ayuu iila yimaadaa weyna i farxad galisaa, waa ilmo yar.”
Maxaa dhici lahaa hadii maalin uu u yimaado wiilkiisa oo uu yiraahdo waxaan taageero u ahay Barcelona?
Ronaldo – oo saddex jeer ku guuleystay Ballon D’or-ka – waxa uu yiri: “Ma aha wax suuro gal ah inuu ebid ii sheego inuu taageero Barcelona. Haddii uu aniga faraceyga yahay, suuragal maha, waan kuu sheegayaa.
“Laakiin hadii ay dhacdo waan aqbalayaa. Uma kaxeyn doono Camp Nou laakiin waan aqbali doonaa.”
Iyada oo ay laba maalin uu ka harsan tahay fiinaalaha Champions League, Ronaldo waxa uu bayaaniyey halka aayihiisa uu ku dambeyn doono.
Horaantii sanadkan, Ronaldo ayaa qishay inuu u dhaqaaqi karayo horyaalka MLS ee dalka Mareykanka laakiin xiddiga reer Portugal ayaa iminka diyaar u ah inuu waayihiisa ciyaareed ku soo afjaro Los Blancos.
“Way iska cadahay waxaan doonayaa inaan joogo halkan, waxaan u maleynayaa inaan ciyaaraha uga fariisan doono Real Madrid,” Ronaldo ayaa sidaa u sheegay La Sexta’s ‘Jugones’ show.
“Inaan heshiiska cusbooneysiinayo Champions League kaddib? Real Madrid kuwa caqli leh ayay noqon doonaan haddii ay ballaariyaan heshiiskeyga.
“Waan ku faraxsanahay Real Madrid, ma arko koox ka fiican midan.”.
Barcelona oo Hector Bellerin u aragta badalka Alves iyo taageerayaasha oo soo dhaweeyay tilaabadaas